Bhizinhi rangu bhizimusi rakanaka here re backlinks rinoita?
Mabhizimisi makuru epaIndaneti ane bhajeti muimba-SEO team uye akagadzirira kuisa mari yakawanda mumashandisirwo ese ekugadzirisa maitiro ane mikana yese yekuunza backlinks. Zvisinei, kune mabhizimisi maduku kana emunharaunda vanoedza kuchengetedza mari inoyerera zvakanaka, kusangana kwekugadzira kungave kusingaoneki sarudzo inobhadhara zvikwereti.
Regai tikurukure kana kusananisa chivako inzira inobhadhara yebhizimisi rekutsvaga yekutsvaga muIndaneti kana kuti hazvina maturo kuita shingairo yekunze kwekubatana kwechirongwa pamucheto wekugadzirisa.
Zvichida kudzoka unokwanisa kuwana kubva pakusangana kwekubatanidza
Ngatitarisei zvakanyanya kuti chivako chekugadzira chii uye kuti chinogona sei kugovera nzvimbo yedu yekutsvaga injini yekutsvaga. Iyi nzira yekugadzirisa kunze inoshandiswa kuratidza injini yekutsvaga kuti inzvimbo yako inokosha sei. Apo injini yekutsvakurudza inofanisisa kuti ndeipi michina inokodzera iyo yakakwirira kwazvo pane peji yemigumisiro yekutsvaga, inoripa kunyanya kukosha kwemibvunzo uye simba rewebhu. Inobatsira Google inopa vashandisi nevanonyanya kukodzera kumibvunzo yavo yekutsvaga mhinduro. Google inotarisa kodzero yebasaiti kushandisa zviitiko zvakasiyana siyana, iyo inonyanya kukosha iyo nhamba uye humwe hwehutano hwekunze hunoendesa kunzvimbo yewebhu.
Yakasimudza simba rekubatanidza, kukosha kunzvimbo yako iyo inogona kupfuura. Simba reAllowlink rinotsanangurwa nemukurumbira uye kuvimbika kwehukama hunobatanidza uye kukosha kwezvakabatanidzwa panobatanidzwa.Kana vashandisi vachitevera mushure mekune backlink, inogona kuonekwa sehupamhi uye yakakwirira.
Chivakwa chekubatanidza pachako chinotakura zvikomborero zvizhinji zvewebsite. Ngatitsanangurirei vamwe vavo:
Ungano dzisina kuwedzera dzinogona kusimbisa chiremera chechigaro chesaiti yako kana kusimudza chitunha kune imwe peji ye web icho chibatanidzwa chinoratidzwa. Somugumisiro, Google ichaona shanduro yako seyakakurumbira uye ipa nzvimbo yako nzvimbo yakakwirira pamwe nekutumira mamwe magwagwa pawebsite yako.
. Kana zvikwangwani zvako zvakakomberedzwa nehutano uye tsvakurudzo-yakagadzirirwa zvichange zvichipa kukosha kune vateereri vako, iwe uchawana magwagwa kubva kuvashandisi uchitsvaga backlinks yako zvakananga kuti uwane mamwe mashoko.
Kana uchiramba uchitaura zita rako muzvinyorwa zvepa blog nezvinyorwa zvevamwe mawebsite, munguva pfupi kana gare gare, vashandi vachabata nomusoro. Uye kunyange kana ava vashandisi vasingatsvaki pahutano hwako, iwe uchavandudza mararamiro ako kuonekwa.
ROI (kudzokera kumariko) Backlinks inogona kugara nokusingaperi, ndiyo chikonzero kukosha kwavo kunogona kuwedzerwa kupfuura nguva. Kana iwe ukasunga mari yako mukuisa hukama husingaperi pane imwe yepamusoro mawebsite, iwe uchawana yakakwirira kudzoka kune iyi inowanikwa nenzira yekugara uchifamba uye kutendeuka Source .